အပြင်ထွက်ချင်ပေမယ့် အိမ်မပိုင်တဲ့ဂေါ်လီလေးတွေအတွက် အခွီရိုက်ကူးထားတဲ့ ဆုအိမ့်စံရဲ့ဗွီဒီယိုလေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
အိမ်မပိုင်တဲ့ ဂေါ်လီလေးတွေကို မန်းရှင်းခေါ်လိုက်ကြနော် ??? #EMPRESS_HSU ☘️?? *ဆုအိမ့်စံ*??
အိမ်မပိုင်တဲ့ ဂေါ်လီလေးတွေကို မန်းရှင်းခေါ်လိုက်ကြနော် ???#EMPRESS_HSU ??? *ဆုအိမ့်စံ*??
Posted by Hsu Eaint San on Tuesday,4August 2020
ဇာတ်ရုပ်ရွေးနေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ ကောင်းမြတ်စံနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့လက်ခံလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်